बर्दियाका थप एक संक्रमितको नेपालगञ्जमा मृत्यु – Sadarline
बाँकेमा अमर प्रहरी स्मारकको उदघाटन
काँग्रेसको जागरण र खजुरा घट्नाको वास्तविकता !
सदरलाइन संवाददाता ७ आश्विन २०७७, बुधबार १३:००
नेपालगञ्ज : भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचाररत एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका ३, बानियाभारका ३९ वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा बुधवार मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।
निमोनिया पीडित ति ब्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उनलाई गत भदौ २९ गते भेरी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । बिरामीको अवस्था जटिल बन्दै गएपछि कोरोनाको उपचारकालागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्वन गर्दासमेत उनलाई बचाउन नसकिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनको उपचारकालागि ४ वटा भेन्टिलेटरको प्रयोग गरिएको थियो । उपचारकै क्रममा बिहान साढे १० बजे बिरामीको मृत्यु भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार मृतक बारबर्दिया नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष हुन् ।
७ आश्विन २०७७, बुधबार १३:००
नेपालगञ्ज : लागुऔषधसहित बाँकेमा दुई जना फक्राउ परेका छन् । लागुऔषध कोरेक्स र सुपर पावर सुर्तिसहित नेपालगञ्ज १८ लग्दहवाका ३२ वर्षीय पप्पु बेहना र ३५ वर्षीय जिलेदार हरिजन पक्राउ परेका हुन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बनकट्टी (क)बाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरुलाई डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ५ मिलन चोकबाट पक्राउ गरेको […]
१६ मंसिर २०७३, बिहीबार १२:५३
३ भाद्र २०७६, मंगलवार १८:५४
नेपालगञ्जको दुई वडामा स्वास्थ्य केन्द्र थप